शिक्षक कर्मचारीको पोशाक परिवर्तन, कस्तो छ त नयाँ पोशाक ? (सूचनासहित) « Sansar News
शिक्षक कर्मचारीको पोशाक परिवर्तन, कस्तो छ त नयाँ पोशाक ? (सूचनासहित)
६ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार १३:३९
काठमाडौं । नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्र्तगत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षक कर्मचारीको पोशाक परिवर्तन गरेको छ । मन्त्रालयले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै कर्मचारीको पोशाक परिवर्तन गरिएको जनाएको छ ।
विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचरीहरुको हाल प्रचलनमा रहेको पोशाक परिवर्तन गर्न नेपाल शिक्षक महासंघबाट अनुरोध भएकाले पोशाक(ड्रेस कोड) परिवर्तन गरिएको सूचनामा उल्लेख छ । मन्त्रालयले तोकिएको पोशाक चालु शैक्षिक सत्रभित्र कार्यान्वयन गर्न समेत अनुरोध गरेको छ ।
परिवर्तन भएका पोशाकमा गाढा खैरो रङको सुट(कोट,पेन्ट्स) , हल्का निलो रङको शर्ट(कमिज) महिला र पुरुष दुवैले प्रयोग गर्न मिल्ने भनि सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी, मौसम अनुसार गाढा खैरो रङको ज्याकेट, कलेजी रङको स्वेटर र कालो रङको जुत्ता महिला तथा पुरुष दुवैले प्रयोग गर्न मिल्ने सूचनामा उल्लेख छ ।
साडी, व्लाउज, कुर्ता सुरुवालमा परिवर्तन नगरिएको सूचनामा जनाइएको छ । पोशाकको नमुना नेपाल शिक्षक महासंघबाट प्राप्त गर्न सकिने सुचनामा उल्लेख छ ।